Zon'olombelona · Jolay, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jolay, 2008
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jolay, 2008
Iràna 31 Jolay 2008
Singapour: Tokony ho ankatoavin'ny fanjakana ho ara-dalàna ve ny varotra taova?
Singapaoro 29 Jolay 2008
Misy adihevitra mafonja miainga ao Singapour : Tokony hankato ny varotra taova ho ara-dalàna ve ny governemanta ? Ireo mamampahefana amin’ny fahasalamana, ireo mpitsabo manampahaizana manokana, ary ireo mpitoraka blaogy maro dia mifampizara fomba fijery momba azy io.
Iran: Mirahalahy miady amin'ny SIDA nosamborina
Iràna 27 Jolay 2008
Saffron Sky no nanoratra fa mpikaroka mirahalahy (Dr. Kamiar sy Dr. Arash Alaei), izay fanta-dtaza iraisam-pirenena noho ny asany amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA any Iran, no nogadrain'ny fitondrana Iraniana nandritra ny iray volana.
Silaovakia: Mitsipaka ny fahaleovantenan'i Kosovo
Kosovo 25 Jolay 2008
Nanambara ny fahaleovantenany ny Repobilikan'i Kosovo tamin'ny 17 feboroary 2008. 43 amin'ny 192 mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana no manaiky ny fahaleovantenan'i Kosovo ary tafiditra amin'izany i Etazonia, Kanada, Aositiralia ary ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Eoropeana. Fa ny tena malaza manohitra kosa — aorain'i Seribia — dia i...
Rosia: Golàgy aseho an-tserasera
Amerika Avaratra 25 Jolay 2008
Robert Amsterdam no manintona ny fampirantiana an-tserasera ny fomba fiasan'ny Golàgy nandritra ny fitondrana Sovietika – natsangan'ny ivon-toerana momba ny tantaram-pirenena sy ny New Media [haino amanjery vaovao] ao amin'ny Anjerimanontolon'i George Mason ary iarahany miasa amin'ny mpandala ny zon'olombelona Rosiana “Memorial” – ka asehony an-dahatsary ao fomba fisamboran'olona nandritra...
Rosia: Akatony ny Tiribonaly iraisam-pirenena raharaha Yogosilavia taloha
Bosnia Herzegovina 25 Jolay 2008
A Step at a Time [dingana amin'ny fotoany] no mandray ho azy ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpikambana ao amin'ny Akademia Rosiana RFE/RL milaza ny fanirian'ny fireneny hanakatonana ny fitsarana iraisam-pirenena misahana ny raharaha Yogosilavia taloha (ICTY na TPIY) taorian'ny nisamborana ny mpitarika Serba Bosiniaka Radovan Karadzic.
Sodàna: Aiza izany fihetsiketsehana lehibe izany?
Sodàna 24 Jolay 2008
Heba Aly ao amin'ny bolongana Untold Stories [tantara tsy voalaza] avy amin'ny foibe Pulitzer mitatitra ny Kirizy no mitatitra fihetsiketseham-panoherana ny mety hisamboran'ny fitsarana iraisam-pirenena ny filoha Al-Bashir izay nataon'olona vitsy ka manontany tena hoe nahoana moa no tsy be mpanaraka araka izay nodradradradraina ny fihetsiketsehana.
90 Taona i Nelson Mandela
Afrika Atsimo 19 Jolay 2008
Ny Zoma 18 jolay teo no feno 90 taona i Nelson Mandela ary dia nihoatra sisitanin'i Afrika Atsimo izany fankalazana izany ka niarahan'izao tontolo izao niaramihira sy nitehaka ny nahatratra ny fety. Andeha ary hiaramankalaza izany koa isika amin'ny alalan'ity fitetezam-paritra ity hamakiana ny fifaliana misongadina manerana ny kaontinanta afrikana ity.
Malaysia: Mpamaham-bolongana voampanga noho ny fanendrikendrehana
Malezia 19 Jolay 2008
Ampangaina noho ny fanendrikendrehana famonoana olona ilay mpamaham-bolongana Malaysiana malaza Raja Petra Kamarudin. I Benstakes no mampahafantatra antsika ny fifandraisan'io fiampangana io amin'ny “fanendrikendrehan'ny ” mpamaham-bolongana ny vadin'ny Praiminisitra ho tafiditra tamin'ny famonoana ilay mpilatro Môngôla.
Shina: Dokambarotra Olaimpika
Shina 17 Jolay 2008
Adrienne Wong avy ao amin'ny Shanghaiist no nanamarika fa ny doka fanoheran'ny Amnesty International ny lalao Olaimpika any Shina sy ny dokambarotry Adidas mandritra ny Lalao Olaimpika dia nolokoiin'ny orinasa iray ihany izay tsy iza fa ny (TBWA).